'धम्कीको पर्वाह नगरी बिरामीको सेवा गरिरहेको छु , तर सुरक्षीत छु भन्न मिल्दैन'- डा . कृष्ण सागर पौडेल
फाल्गुन ०३, २०७५, शुक्रबार
(आफुलाई सिआइबी अफिसर भन्दै क्यान्सर हस्पिटल , भरतपुरका बालरोग बिभाग प्रमुख डक्टर कृष्ण सागर पौडेललाई कार्यकक्षमा नै धम्की दिइएको थियो। घटनामा संलग्न पक्षलाई प्रहरिले हिरासतमा लिएको छ तर प्रहरीले कारबाही अगाडि बढाउन खोज्दा खोज्दै पनि एक साता सम्म घटनालाई सामसुम पार्ने प्रयत्न गरिएपछी यो घटना अझै रहस्यमय बन्न पुग्यो । त्यही रहस्य बाहिर ल्याउने प्रयत्नमा ई-हुलाकी डट कम ले डाक्टर पौडेल सङ केही प्रश्नहरु राखेको थियो ।)
डाक्टर साब तपाइँलाई नक्कली सिआइबीको धम्की आएको सत्य हो ?
नक्कली सिआइबी भन्ने मलाई थहा भएन , सुरुमा उनिहरु सिआइबीको इन्स्पेक्टर हुँ भनी अति संबेदनसिल कार्यस्थलमा आइ चिकित्सकहरुको कोठामा एक्लै थुनी कारबाहीको धम्की दिदै , आफुहरुले केही दिनदेखी पिछा गरिरहेको र कार्यस्थल बाहिर कार्बाही गर्ने चेतावनी दिएर गएका थिए। त्यतिबेला अस्पतालमा सुरक्षा कडा थियो , नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र सिडिओ लगायतका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु अस्पतालमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्थ्यो ।
२४ गतेको घटना किन अहिले मात्र बाहिर आयो ? के यसलाई गुपचुप राख्न खोजियो ?
मैले घटना घटेको पाँच मिनेट भित्रनै प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत अस्पताल प्रसासनलाई जानकारी गराएको हु । सो सम्बधमा नेपाल चिकित्सक संघ जिल्ला साखाका पदाधिकारीलाई जानकारी गराएको थिए । यो प्रक्रियालाई सकेसम्म गुपचुप पार्ने नियतले ढिला भएको हो कि अन्य कुनै कारणले त्यो मलाई थहा भएन । मैले त तत्काल सार्बजनिक गरि दोषीलाई पक्राउ गरि अनुसन्धानको माग गरेको हुँ । मैले सहज प्रक्रियाबाटै निकास आउने बिश्वासमा अन्य ब्यक्तिगत पहल वा बक्तब्यबाजि गरिन तर त्यसो भएन प्र.जि.अले भने तत्काल एकजना अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न सफल भएकोले ढिलै भएपनी थप ब्यक्तिहरु पक्राउ हुने र सत्यतथ्य बाहिर आउनेमा आशावादी छु ।
धम्की प्रकरणमा कार्यकारी निर्देशकको पनि नाम लिइएको पाइयो ? तपाईं हरुको बिचमा केही समस्या हो ?
म एक वरिष्ठ चिकित्सक भएको नाताले कार्यकारी निर्देशक सङ असहमती हुदैमा यस्तो तहसम्म हुन सक्छ जस्तो लाग्दैन । उहाँ मेरो समकक्षी चिकित्सक हो । पदले उहाँ कार्यकारी निर्देशक हो । तर सिआइबीको हवाला दिदै धम्की दिनेहरुले डा.बिजयसङ सल्लाहामा कारबाहीको लागी आएको बताउनु , मलाई कार्यकारी निर्देशकलाई असहयोग गरेको भनेर धम्क्याउनु र मैले यो सबै जानकारी गराउदापनी २४ घण्टा सम्म पनि कुनै चासो नराख्नु अर्को दिन डक्टर हरुको बैठकमा कुरा राखी लिखित निबेदन दिदा समेत मलाई कुनै सहयोग नगरेको , प्रहरी प्रसासनमा उजुरी गर्न र अन्य प्रक्रियामा प्राससनिक तथा कानुनी सहयोग माग गर्दा समेत उपलब्ध नगराएकोले केही संखा पैदा भएको छ ।यथार्थ कुरा छानबिन पछि पत्ता लाग्ने नै छ आशा गरौ त्यस्तो नहोस । कार्यकारी निर्देशकद्वारा विभिन्न सन्चार माध्यममा छानबिनको लागि सहयोग गरेको छु भनेर सार्बजनिक गरिएको कुरा चाहिँ झुठा हो ।
अन्य संकास्पद गतिविधि केही नोट गर्नु भएको छ ?
सिआइबी को हवाला दिदै मलाई आक्रमण प्रयास गर्ने रोहित क्षेत्री र बिधान गुरुङ केहि दिनदेखी अस्पताल आएको पटक पटक अस्पताल प्रशासन सङ भेटेको र स्वयं कार्यकारी निर्देशक सङ समेत छुट्टै मिटिङ बसेको जानकारी पछि पाइएकोले छ भने अस्पतालको सबै ठाउको सिसि टिभी कार्यकारी निर्देशक कै कोठामा रहेकोले ती ब्यक्तीहरु घटना अगााडी निर्बाध घुम्नु र घटना पछि निर्देशक सत्य तथ्य पत्तालगाउन उदासीन देखिनुको कतै तालमेत त छैन भनेर सोच्ने आधार बनेको छ ।
यो तपाईंले बिगतमा अस्पताल सुधारको लागी गरेका प्रयत्नहरु बिरुद्दको आक्रोश हुन सक्छ ?
म विगतमा अस्पतालको बिभिन्न जिम्मेवारीमा बस्दा अनियमितता हुन नदिन विभिन्न प्रयासहरु गरेको बिदितै छ । सो समयमा पनि विभिन्न बहानामा जिम्मेवारी बाट हटाउन खोजेको र उहाँ कार्यकारी निर्देशक हुने बित्तिकै सबै जिम्मेवारी बाट बिनाकारण छोटो अबधिमानै हटाएको जग जाहेर छ । बिशेषत खरिदको प्रक्रियामा उहाहरुको इच्छा अनुसार कामगर्न नसक्दा हटाइएको भन्ने लाग्छ । तर मैले गरेका कार्यहरु सदैब अस्पत्तको हितमा नै थिए र छन । काम गर्दागर्दै हटाउनु ,त्यसपछी लगातार ब्यक्तिगत , पारिवारिक र पेशागत कार्यलाई समेत असर पर्ने गरी भएका उहाका गतिबिधीले मलाई असर त गरेको छैन । तर यो हदसम्म त नहोला जस्तो लाग्छ फेरिपनी घटना पछिका गतिबिधिले संका उत्पन्न भने गराएको छ ।
एकजना बुद्धिजीवी तथा पुर्ब सन्चालक समिती सदस्यले क्यान्सर अस्पताललाई नै क्यान्सर भएको बताउनु भएको थियो । अस्पतालमा बेथिति बढेकै हो ?
उहाँले उठाएका कुराहरु प्रती म सहमत छु । यहाँ सुधारका कुराहरु गर्दा ,अस्पतालको हितमा कामगर्दा पनि ,कुनै पदाधिकारीको मत सङ सहमत नहुदा , जस्तो सुकै पनि कारबाही गर्न पछि नहटेको ईतिहास छ । यो घटना पनि यस्तै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हो भन्ने संका लागेको छ । बिरामी र अस्पतालको हितमा काम गर्न खोज्ने चिकित्सकहरुलाइ निरुत्साहित गर्ने संगठित गिरोहको चालबाजी हुन सक्छ ।
आफूलाई कति सुरक्षित महशुस गरिरहनु भएको छ ?
म कामगर्दा बिरामिको उपचारमा तल्लिन हुने र जस्तो सुकै चुनौतिको पनि सामना गर्न नडराउने स्वभावको भएको ले आफ्नो पेशागत कार्यमा नै निरन्तर छु ।मलाई सुरक्षा दिने जिम्मेवारी अस्पताल प्रशासन तथा गृह प्रशासनको भएको र सोको लागि सुरक्षाको माग गरिसकेको ले अस्पताल प्रशासनबाट सहयोग नमिले पनि गृह प्रशासन , शुभचिन्तक , बिरामी तथा बिरामिका अभिभावक बाट सहयोग र सद्भाव पाएको छु ।तसर्थ म मेरो सुरक्षाको प्रवाह नगरी कार्यक्षेत्रमा थप उच्चमनोबलका साथ खटिरहेको छु । मेरो सुरक्षा गर्ने जिम्मा नेपाल सरकारको पनि हो भन्ने लाग्छ तसर्थ नबिराउनु नडराउनु भनेझै मैले कुनै गल्ती नगरेकोले म ढुक्क छु ।
अन्त्यमा स्वास्थ्य जस्तो संबेदनसिल क्षेत्रमा यस्ता हर्कत रोक्न के गर्नु पर्ला ?
स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्रमा यस्तो हुनु अत्यन्तै दुखदायी कुरा हो , यसको जति निन्दा गरेपनी कम नै हुन्छ । त्यसमा पनि बच्चाको क्यान्सर / ब्लड क्यान्सर जस्तो संबेदनसिल क्षेत्रमा यस्तो हुनु झनै गम्भीर विषय हो । यस्ता घटनालाई जरैदेखी निर्मुल गर्न सुक्ष्म खोज अनुसन्धान गरि अपराधिक गिरोह सम्म पुग्न आबस्यक छ । यस्ता समूह ब्यक्ती र प्रवृत्तिहरुलाइ निस्तेज पार्न हदै सम्मको कारबाही गरिनु पर्छ । भबिस्यमा यस्ता घटना नदोहोरिने बाताबरण तयार गर्नु पर्छ ।